Detoronomy 22 - Ny Baiboly
Detoronomy toko 22
Ny zava-bery hita - Didy sy fandraràna madinika sasany - Ny momba ny fanambadiana.
1Raha mahita omby na ondry mania an'ny rahalahinao hianao, dia aza hihodiviranao, fa avereno any amin'ny rahalahinao izany. 2Raha tsy akaikinao anefa ny itoeran'ny rahalahinao, ka tsy fantatrao izy, dia raiso ao aminao ilay biby, ka ho ao aminao izy mandra-pahatongan'ny rahalainao mitady azy, ary amin'izay dia haverinao aminy. 3Toy izany koa no hataonao amin'ny zava-bery rehetra, izay verin'ny rahalahinao ka hitanao, aza hihodiviranao izany.
4Raha hitanao lavo eny an-dàlana ny ampondra na ombin'ny rahalahinao, dia aza hihodiviranao, fa tsy maintsy manampy azy mihitsy hianao hanarina ny lavo.
5Aoka ny vehivavy tsy hitafy fitafian-dehilahy, ary aoka ny lehilahy tsy hitafy fitafiam-behivavy, fa izay rehetra manao izany dia fahavetavetana eo anatrehan'ny Tompo Andriamanitrao.
6Raha mahita akanim-borona hianao, eny an-dàlana na eny ambony hazo, na ety amin'ny tany, na efa zanany na mbola atodiny, ka kotrehin-dreniny ao, na ny zanany na ny atodiny, dia aza alaina omban-dreniny ny zanany; 7tsy maintsy halefanao handeha ny reniny, fa ny zanany ihany no alao ho anao, mba ho sambatra sy ho lava andro hianao.
8Raha manao trano vaovao hianao, dia asio aro-fanina manodidina ny tafon-tranonao mba tsy hanisy rà amin'ny tranonao hianao, raha sendra misy olona mianjera avy aminy.
9Aza fafazana voan-javatra roa karazana ny tanim-boalobokao, fandrao samy holazaina zavatra masina avy izy, na ny zavatra nafafinao na ny vokatry ny tanim-boalobokao. 10Aza mampiray jioga ny omby sy ny ampondra hiasa tany. 11Aza mitafy lamba voatenona tamin'ny volon'ondry mifahana rongony.
12Asio sahondrany ny zorony efatra amin'ny lamba itafianao.
13Raha misy lehilahy nampakatra vehivavy ho vadiny, sy efa nandeha taminy, nefa tonga tsy tia azy indray, 14ka manendrikendrika azy amin'izay mahafa-baraka sy mahafa-pofona azy, manao hoe: Nampakatra ity vehivavy ity aho, kanjo nony nandeha taminy aho dia hitako fa tsy virjiny izy, 15dia halain'ny ray aman-drenin-drazazavavy ny famantarana azy ho virjiny, ka haposany amin'ny loholon'ny tanàna eo am-bavahady. 16Ary hiteny amin'ny loholona ny rain-drazazavavy, hanao hoe: Nomeko ho vadin'io lehilahy io ny zanako vavy, kanjo nony tsy tiany, 17endrikendrehiny amin'izay mahafa-baraka azy, lazainy hoe: Hitako fa tsy virjiny ny zanakao. Nefa indreto ny famantarana fa virjiny ny zanako vavy. Sady velariny eo anatrehan'ny loholon'ny tanàna amin'izay ny fitafiany. 18Dia hosamborin'ny loholon'ny tanàna izany lehilahy izany, ka hofaiziny. 19Hampandoavina sazy, volafotsy zato sikla izy, ary homeny ny rain-drazazavavy izany, noho izy nanala baraka ny iray amin'ny virjinin'Israely, sady hitoetra ho vadiny ravehivavy ka tsy azony isaorana raha velona koa izy. 20Raha marina ihany kosa anefa izany, ka hita tokoa ny tsy maha-virjiny an-drazazavavy, 21dia hoenti-mivoaka ho eo am-baravaran-drainy razazavavy, ka hitora-bato azy mandra-pahafatiny ny mponina ao an-tanànany, satria zava-betaveta loatra no efa nataony teo amin'Israely, tamin'ny nijangajangany tao an-tranon-drainy. Izany no hamongoranao ny ratsy eo afovoanao.
22Raha misy lehilahy azo mandry amim-behivavy manam-bady dia hovonoina, ho faty avokoa izy roa, na ralehilahy nandry tamin-dravehivavy, na ravehivavy. Izany no hamongoranao ny ratsy ao afovoan'Israely.
23Raha misy zazavavy virjiny efa fofombadin'olona, ary misy lehilahy mifanehitra aminy ao an-tanàna ka mandry aminy, 24dia ento mivoaka ho eo ambavahadin'ny tanàna izy roa, ka torahy vato ho faty: razazavavy moa noho izy niantso tao an-tanàna, ralehilahy kosa noho izy nametaveta ny vadin'ny namany. Izany no hamongoranao ny ratsy eo afovoanao. 25Fa raha any an-tsaha kosa ralehilahy no mifanehatra amin-drazazavavy fofombadin'olona ka manao an-keriny mandry aminy, dia ralehilahy nandry taminy ihany no hatao maty, 26aza manino-maninona an-drazazavavy, satria tsy manan-keloka tokony hahafaty azy izy, sahala amin'ny raha misy olona namely ny namany ka mamono azy izany, zavatra iray ihany ireo; 27any an-tsaha izy no nifanehatra taminy, ary niantso ihany razazavavy fofombadin'olona, fa tsy nisy namonjy azy.
28Raha misy lehilahy mifanehatra amin-jazavavy virjiny tsy mbola voafofo, ka misavika azy sy mandry aminy, ary tratra izy roa; 29dia hanome volafotsy dimampolo sikla an-drain-drazazavavy ity lehilahy nandry taminy, ary ho vadiny razazavavy, satria efa nanala baraka azy izy, ka tsy azony isaorana raha mbola velona koa izy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.1254 seconds